भीख मागेर अनलाइनबाटै ५५ लाख जम्मा ! - Everest Dainik - News from Nepal
भीख मागेर अनलाइनबाटै ५५ लाख जम्मा !
काठमाडौं, जेठ ३२ । एक यरोपेली महिलाले अनलाइनमार्फत् भीख मागेर ५५ लाख ६९ हजार जम्मा गरेकी छिन् ।उक्त भीख सहयोगका लागि भन्दा पनि गलत नियत राखेर कमाएको थाह पाएपछि उनलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स प्रहरीले दुबईमा पक्राउ गरेको छ ।
श्रीमानले छाडेका कारण बच्चाको लालनपालनको जिम्मा आफ्नो काँधमा रहेको जनाउँदै ती महिला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्लेटफर्ममा फोटो पोस्ट गरेर पैसा माग्थिन् । उनले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा अनेकन एकाउन्ट खोलेर बच्चाको फोटो देखाउँदै भीख माग्ने गरेकी थिइन् । उनको यो हर्कत थाहा पाएपछि उनका श्रीमान्ले प्रहरीसमक्ष उजुरी गरेका थिए ।
बच्चा आफ्नै साथमा रहेको र ती महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो बेइज्जत गरेको लिखित उजुरी परेपछि प्रहरीले ती महिलालाई पक्राउ गरेको हो । साउदी कानुनअनुसार अनलाइनमार्फत् भीख माग्नु अपराध मानिन्छ । यो कुरा प्रमाणित भए ती महिलाले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुका साथै जेल जानुपर्नेसम्म हुन सक्छ । एजेन्सी
ट्याग्स: Europeli women